ရန်ကုန်မြို့ရှိ ၂ လုံး ၃ လုံး ဒိုင်များ ဒီနေ့ကစပြီးရပ်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရန်ကုန်မြို့ရှိ ၂ လုံး ၃ လုံး ဒိုင်များ ဒီနေ့ကစပြီးရပ်ပြီ
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ၂ လုံး ၃ လုံး ဒိုင်များ ဒီနေ့ကစပြီးရပ်ပြီ
Posted by fatty on May 30, 2011 in Copy/Paste | 21 comments
2 digit illegal lottery totally stop
အခြေခံလူတန်းစားများဘ၀ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အရ အသေးစားငွေချေးမှုများ
ပြုလုပ်ရန် စတင်ဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်ရာ ချေးပေးလိုက်သောချေးငွေများ ၂လုံး ၃လုံးဒိုင်
များဆီသို့ ရောက်ကုန်မည်စိုးသဖြင့် ထိရောက်စွာ အရေးယူတော့မည်ဖြစ်ရာ ……
ယနေ့မှစပြီး ဒိုင်များအားလုံးနီးပါး ရပ်ဆိုင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အချို့ကမူ တလလောက်တော့အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုဆိုကြသူများလည်းရှိကြသည်။
ဟုတ်တယ်ဗျို့… ၂ လုံး ၃ လုံးသမားတွေ မရှိမှကောင်းမှာ… နို့မို့သာဆိုရင် ဒိုင်တွေပဲ စားနေကြတာလေ…
ဖြစ်သင့်တာ ကြာပါပြီ .. အရှည် တည်တံ့ရင် ကောင်းမယ် လို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်
ခိုးကူခွေ ရောင်းတာတို့ လောင်းကစားဒိုင်တို့က ပြည်သူလူထုနဲ့ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ရတာပါ ဆိုင်တွေ ဒိုင်တွေ ဘယ်မှာရှိတာ ကလေးတောင် သိတဲ့ကိစ္စပါ တကယ်လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်တာရှိရင် တကယ် အမြစ်ပါပျက်ပါတယ်
2 လုံး ၃ လုံး တကယ်ပျောက်ရင် အစိုးရကို ၁ မှတ်ပေးမယ်။
တကယ်တော့ ရဲ၊တပ်၊ထောက် တို့နဲ့ကင်းတဲ့ လောင်းကစားဒိုင်ဆိုလို့ တောတွေရွာတွေမှာ ငါးဆယ်ဘိုး တစ်ရာဘိုးကိုင်တဲ့ ဒိုင်ပေါက်စလေး တွေပဲရှိပါတယ်။ အခုလိုစီမံချက်ရှိတဲ့အခါ အသံပေးလိုက်ရင် ခဏပျောက်သွားပေမယ့် မကြာခင်ပြန်လာမှာပါပဲ။
၂လုံး ၃လုံး ဆိုရင်ဒိုင်တွေချည်းဘဲ စားရတယ်ဆိုလို့ ကိုယ်တိုင်ဒိုင်ကိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်..ရွာထဲမှာလဲ ကျွန်တော့်လို ကိုယ်တိုင် ၂လုံး၃လုံး လုပ်ဖူးသူများလဲရှိကောင်းရှိမှာပါ..နောက်ဆုံးတော့ ဒိုင်တွေဘဲစားရတယ်ဆိုတာသာအမှန်ဖြစ်ရင် မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ဒိုင်တွေချည်းဘဲဖြစ်ကုန်မှာပေါ့..
ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ဒိုင်မှာလဲမသက်သာလှပါဘူး..
နယ်ထိန်းရဲ..နယ်ထိန်းအင်ချက်ရဲ..မြို့နယ်ရဲ..ခရိုင်ရဲ..တိုင်းရဲ..စရဖ…စသုံးလုံး..စခန်းမူး…အစရှိသော ငိုစား ရီစား များကိုလစဉ်ဆက်ကြေးပေးရပါတယ်..
ဒိုင်ကတော့ လျှော်ရတစ်လည့် စားရတစ်လည့်နဲ့ နောက်ဆုံး စာရင်းစစ်တော့ ကော်မရှင်ကြေးနဲ့ လိုင်းကြေးထဲမှာတင် ကုန်တာပါဘဲ..
ကော်မရှင်စားတွေလဲ အဖမ်းအစီးလွတ်အောင်ရဲကြေးပေးရလို့ သူတို့လဲသိပ်မသက်သာလှပါဘူး
ဒိုင်တွေကစားရရင်အောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့ စင်တင်..မာဆက်..KTV တွေမှာပိုက်ဆံသုံးကြတယ်
ထိုးသားတွေကလဲ ပေါက်ရင် အဲဒီနေရာတွေမှာဘဲပိုက်ဆံကုန်ကြတယ်
ဒါကြောင့် နောက်ဆုံး ငွေတွေက စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ရဲ တွေဆီမှာဘဲ အဆုံးသတ်ကြတယ်လို့မြင်ပါတယ်
လောင်းကစားလုပ်တာ မကောင်းတာမှန်သော်လည်း မြန်မာနှိင်ငံက မတိုးတက်တာ ၂လုံး၃လုံး ကြောင့်အဓိကလို့တော့မထင်မိပါဘူး..ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့်လဲ??????
ဒိုင်ကြီးများဖြစ်တဲ့ တရုတ်တန်းက တရုတ်တွေကိုအရင်ဖမ်းရင် အစိုးရကို အမှတ်ပေးရတာပေါ့နော်။
လောင်းကစား နဲ့ ဒုစရိုက်မရှိရင် မပျော်နိုင်တာက ရဲပါ။
ရဲတွေ ပိုက်ဆံယူပြီး လွှတ်ထားလို့ ဒီ ၂လုံးဒိုင်တွေ လုပ်နေကြတာ။ မာဆတ်တွေ စွပ်နေကြတာ။
အဓိက စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့ ငွေဝင်လမ်း အလုပ်အကိုင် ခိုင်မာမှုမရှိလို့ဖြစ်တာပါ။
အများက ထိုးတော့ လိုက်ယောင်ကြတဲ့ လူတန်းစားလည်း ရှိပါတယ်။
လောဘနဲ့ ဥပဒေ မဲ့မှုတွေကြောင့်ပါ။
တကယ်ကိုင်ရင် တကယ်ပျောက်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးက လူတွေလည်း စားခွက်ပျောက်ပါတယ်။
ဟုတ်ရဲ့လားxxx ဟုတ်ရဲ့လား xxx- တစ်ကယ်ကြီးပဲလား နားရှိလို့သာကြား မျကိရှိရှိလို့သာမြင်လိုက်ရတယ်……။ သိပ်တော့မယုံသေးဘူး….. ကင်ဆာလိုအမြစ်စွဲနေတဲ့ရောဂါ နာကို ချက်ချင်းကြီး ကုစားလို့ မရနိုင်ပါဘူး….။ တစ်ကယ်တမ်း အလျော့မပေးပဲ အားပြိုင်ကြရင်တော့ ပွဲကကြည့်ကောင်းဦးမယ်…။
၂လုံး ၃ လုံး ဆိုတာက အဖျားအနားပါ။
အရင်းအမြစ်က ပညာမဲ့တာ၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့တာ၊ နဲ့ လုပ်စရာမရှိတာ။
သူတို့က ဘာလုပ်လို့တုန်း ?
ကိုယ်ကညံ့ပြီး တော်ရမယ့်သူတွေနေရာကို ဦးထား လုထားရင် အပြစ်ရှိတယ်။
အောက်ခြေရဲ ကတော့ ကြားညပ်တဲ့ ဓားစာခံပါ။
ဒီခေတ်မှာ ရဲတွေက စခန်းအတွက် ၊ အချုပ်ခန်းအတွက်၊ ရုံးအတွက်၊ အထက်အဆင့်ဆင့်သော အရာရှိကြီးများ အတွက်၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ယူနီဖောင်းနဲ့ equipment အတွက်ပါ ပိုက်ဆံရှာရတယ်။
အဲဒီပိုက်ဆံအတွက် လောင်းကစားဒိုင်တွေ အနှိပ်ခန်းတွေ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ တခြား တရားမ၀င်လုပ်ငန်းတွေက ဆက်ကြေးကောက်ရတယ်။
ဒါတောင် လူကြီးတွေနဲ့သိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆီက တပြားမှရတာမဟုတ်ဘူး။ ဖရီး စောင့်ရှောက်ပေးရတာ။
ပြည်သူတွေကို မဟုတ်တာသိပ်မလုပ်ဖြစ်အောင် တားမြစ်မှုလဲရှိရမယ်။ ပညာပေးမှုလဲရှိရမယ်။
ဟုတ်တာတွေ များများလုပ်နိုင် လုပ်ဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးမှု၊ လမ်းပြမှု ၊ ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိရမယ်။
လောလောဆယ် ထမတော်လှန်ရင်ပြီးရော နင်တို့ဖာသာ ဘာဖြစ်ဖြစ် လို့ ပစ် မထားရဘူး ……
ဘောပွဲဒိုင်တွေပါ အကုန်ရပ်တာဗျို့ ……။ လောလောဆယ်တော့ဆေးပြတ်သလိုခံစားနေရမှာပေါ့ ..။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ မရှိနွမ်းပါးတဲ့ သူတွေက… ၂လုံး ၃လုံးဆိုတာဖြတ်လမ်းနဲ့ ဆင်းရဲတွင်းက လွယ်လွယ် လွတ်မြောက်စေနိူင်တယ် ချမ်းသာစေနိုင်တယ်….ဆိုတဲ့ ပညာမဲ့တဲ့အမြင်မျိုးကြောင့် လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ဘ၀ပျက်သူတွေလည်းအများကြီးပါ၊ ရှေ့မှာဘ၀ပျက်တာကိုသင်ခန်း စာမယူပဲ နောက်လူက ဒီလူအသုံးမကျလို့ဘ၀ပျက်တာ ငါကတော့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး ထပ်ထိုးတော့ သူလဲသွားတာပဲ။အချီကြီး ထိုးလို့ပေါက်ပြန်တော့လည်း ဒိုင်ကပြေး၊ပြသာနာဖြစ်။ ဒိုင်တွေ ဖမ်းလို့ပျောက်တယ်ဆိုတာခဏလို့ထင်ပါတယ်။
အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းတွေထုတ်ချေးပြီးတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခက်မယ်ထင်ပါတယ်၊ ချေးယူမယ့်သူဟာဘာတွေလုပ်သလဲ ပြည်သူဘယ်နှစ်ယောက်ကိုအလုပ်ပေးနိုင်သလဲ ။
ပြည်သူများများအလုပ်ပေးနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကို policy နဲ့ ချေးငွေနဲ့ နိုင်ငံတော်က ထိထိရောက်ရောက်ထောက်ထောက်ပံ့ အားပေးသင့်တယ် လို့ထင်ပါတယ်။ အထက်က policy ချပေးပေမဲ့ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ခြစားမှုကလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဟာ တောင်သူလယ်သမား အလုပ်သမားတွေကိုအခြေခံတယ်ဆိုတာထက် အခွန်ထမ်းတဲ့ ကုပဏီတွေ စက်ရုံတွေ ကုန်သည် ပွဲစားတွေ လုပ်ငန်းရှင် တွေကို အခြေခံသင့်ပါတယ်၊ ထိုက်သင့်တဲ့အခွန်ကိုကောက်ယူပြီး အားပေးသင့်ပါတယ်။ သူတို့အလုပ်ကောင်းတာနဲ့အမျှ ပြည်သူတွေလည်းအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေပိုလာစေနိုင်မယ် လို့ထင်ပါတယ်။
၁လုံး၂လုံး၃လုံး တကယ်ရပ်အောင်လုပ်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
စက်မှုဇုံတွေဖွင့်ထားပြီး မီးကမမှန် policyက မတည်ငြိမ်တော့ ဘယ်သူမှ နှစ်ရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ့် စက်ရုံတွေ မတည်ထောင်တော့ပဲ Hit & Run လုပ်လို့ရတဲ့ ရွှေကစားတာ ငွေကစားတာ ကားနဲ့မြေကစားတာ ပဲကစားတာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပါ။
အဲဒီတော့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ မရှိလို့ Brain Drain ကနေ Labour Drain ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။
တောဘက်ကလူလတ်ပိုင်းတွေ ရွာလုံးကျွတ် နိုင်ငံခြားထွက် ကူလီလုပ်နေကြတယ်။အင်္ဂလိပ်စကား တရုတ် မလေးစကား ဘာမှတတ်စရာမလို။
ဒီအချိန်မှာအသေးစား ငွေချေးပေးလည်း ပြန်မဆပ်ရုံပဲ ရှိမှာပဲ။
sanction ကြောင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေလည်း နလန်မထူနိုင်။
ပြည်တွင်းဖြစ်ဆိုလို့ ဂါဂါနဲ့ Oishi ပဲ ရှိတော့မယ်။
တစ်နှစ်လား၊ တစ်လ လား၊ တစ် ပါတ်လား
ဘာဆိုဘာမှမကျန် ရောက်အောင်သွားတာ အံ့အြမိတယ်။
တချို့ပါပဲ အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့၊ တကယ်တမ်းကျတော့ အိမ်ကအဟောင်းကြီးကို
အရေးယူတယ်ဆိုတာ တနေရာ၊ တခုတည်းကွက်ပြီး အရေးယူလို့မရပါဘူး။ ပေါ်ပင် အရေးယူမှုတွေခေတ်စားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးယူပြီး ပြန်ခေါင်ေးထာင်လာတဲ့ အဖြစ်တွေကဘာ ကိုသက်သေပြသလဲဆိုတော့၊ နောင်အပြစ်ကျူးလွန်မဲ့သူတွေ အတွက် “ဒါခနပါဘဲကွာ” ဆိုတဲ့ အဖြေကိုပေးနေပါတယ်။
တကယ်ပျောက်ချင်ရင်… သတင်းပေးတွေကို.. ဖမ်းမိငွေရဲ့ ၂၀ရာနှုန်းပေးမယ်… အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါလား..လို့..။
ပြီးတော့မှ.. မြန်မာပြည်ရဲ့..အချို့တဲ့ဆုံးပြည်နယ်..ဒေသတခု(ဥပမာ။ နာဂတောင်တန်း)ကို…အဲဒီဒေသရဲ့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများသာ.. လောင်းကစားလုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်လိုင်စင်… ဖယ်ဒရယ်အစိုးရကချပေးလိုက်…။
ဟား ဟား ဟားလို့ ရီလိုက်ချင်တယ်၊ ဖြစ်မလားလို့ မျှော်နေသူများကို…..ဒါကြောင့်လဲ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့ အဓမ္မဝါဒီ ရုပ်ဝါဒီ သဂျီးပြုသမျှ နုနေရတာ။ လုံးဝ မသနားဘူး….
ဒီ စီမံချက်ကို တကယ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရင်တော့ မြန်မာပြည်အတွက် သိသိသာသာတိုးတက်လာမှာပါ။
1လုံး၊ 2လုံး၊ 3လုံး အကုန်ပျောက်သွားမှာဆိုတာကတော့မယုံပါဘူး။ ပျောက်သွားအောင်လဲ လုပ်သွားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခဏတာဘဲပေါ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ထက်ထက် တို့အသိက 1,2,3 အကုန်ဒိုင်ခံတာလေ
ဒိုင်ကပြောတယ် ရဲက ခဏဘဲရပ်ထားလို့ ပြောတယ်။ နောက်အခြေအနေကြည့်ပြီးပြောပေးမယ် ခုတော့လိုင်းကြေး ပေးလိုက်ဆိုပြီး ထွက်သွားတယ်လေ။ 2,3 ကတော့လိုင်းကြေး ဘယ်လောက်ပေးရလဲ တော့မသိဘူး။ 1လုံးကတော့ 1လကို (4)သိန်းတောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။
ဒါတောင်သူတို့ခရီးထွက်တာမပါဘူးလေ နေပြည်တော်၊ ဘာလို့အစည်းအဝေးသွားရမှာ ဆိုပြီး ပိုက်ဆံလာကောက်တယ်လေ။ နောက်ပြီးကျတော့သူတို့၇ဲဝန်ထမ်းကဒ်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေတွေမှာ လိုက်ပြီးအလှူခံတယ်လေ ရဲတစ်ယောက်ကို (200)ကျပ်ကနေ့တိုင်းပေးရတယ်။ အဲဒီ(200)ကျပ်က တစ်နေ့ကို (65000)လောက်ကျတယ်။ နောက်ပြီးအရာရှိတွေက သူတို့အိမ်ဆန်ကုန်ပြီဆိုရင် ဒိုင်တွေဆီကို လှမ်းပြီးဖုန်းဆက်လိုက်တယ် အရောက်ပို့ပေးရတယ်လေ။ တစ်ဒိုင်က ဆီတွေရင် တစ်ဒိုင်က ဆန် အဲလိုမျိုးတွေပေါ့။ သူတို့ရဲ့လစာနဲ့လည်းမလောက်တော့ လောင်းကစားဒိုင်တွေရှိမှ သူတို့တွေက စားရတာလေ။ ဒါမှသူတို့ကိုအထက်ဖား အထက်ကနေတစ်ဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်။ (1.2,3 ) အကုန်လုံးပျောက်စေချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က ပျောက်အောင်မလုပ်နိုင်လောက်ဘူး။ သူတို့လစာနဲ့မလောက်လို့လေ။ တစ်မျိုးတော့မထင်ပါနဲ့ မန်းဂေဇက်မှ အစ်ကိုတွေအမတွေညီမသိူသလောက်ပြောပြတာပါ။ 1,2,3 ပျောက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ရှင့်။